Violence Throws Spotlight on Rohingya | Danya Wadi
Item – ခေါင်းစဉ်ခွဲ
News – သတင်း
Open letter အိတ်ဖွင့်စာ
Articles – ဆောင်းပါး
History – သမိုင်း
Interviews – အင်တာဗျူး
Docu: – အထောက်ထား
Laws – ဥပဒေ
Health – ကျန်းမာရေး
Politics – ပေါ်လစီ
Technique – နည်းပညာ
Notes – မှတ်စု
Notice – သတိပေးချက်
Other – အခြား
Specail – အထူး
General – အထွေထွေ
Browsing: » Home »Untags»Violence Throws Spotlight on Rohingya	Leaveacomment
Violence Throws Spotlight on Rohingya	Posted by danyawadi on June 18, 2012 in Untags	Back to Album · U Ba’s Photos · U Ba’s Profile
A Rohingya Muslim family seen in the Burmese-Bangladesh border after fleeing violence in Burma’s Rakhine state, June 12, 2012.
The week-long sectarian violence between Buddhists and Muslims in Burma’s western Rakhine state has thrown the spotlight on the Rohingya, one of the most oppressed groups in the country, and compels the government to addressaburning issue that has been swept under the carpet for decades.
In revenge attacks, Rohingya mobs in the state’s capital Sittwe burned the homes and businesses of ethnic Rakhine Buddhists, and the army opened fire and allegedly killed Rohingyas, according to Human Rights Watch. Mobs of Rohingyas and Buddhists armed with sticks and swords have also gone onarampage, burning hundreds of homes and resulting in numerous deaths.
“The military junta over the past 20 years has really emphasized Buddhism as the religion of the ‘true’ Burmese people, and they have been cited repeatedly for religious persecution by the United States,” she said.
The government’s refusal to recognize that the Rohingya are Burmese citizens is among reasons why Burma has been blacklisted by the U.S. State Department asa“country of particular concern” in its annual surveys on international religious freedom.
The current government of President Thein Sein, which has been lauded for implementing political and economic reforms over the last year, has come under criticism for continuing the junta’s discriminatory policies towards the Rohingya.
The Rohingya were given voting rights in Burma’s landmark 2010 elections and, according to the report, were promised citizenship if they voted for the military regime’s representatives.
Thein Sein’s reform plans include negotiations with armed ethnic groups fighting for autonomy. Rohingya activists demand recognition asaBurmese ethnic group, claimingacenturies-old link to Rakhine state.
But even some pro-democracy dissidents from Burma’s ethnic Burman majority, which makes up nearly 70 percent of the country’s population, refuse to acknowledge the Rohingyas as compatriots.
“The Rohingya are notaBurmese ethnic group. The root cause of the violence … comes from across the border and foreign countries,” he said, adding that countries that criticize Burma for its refusal to recognize the Rohingya should respect its sovereignty.
Against the backdrop of the current Rohingya crisis, confronting the ethnic problem will be the “most difficult challenge” for Thein Sein’s government, said Suzanne DiMaggio, the vice-president of New York-based Asia Society’s Global Policy Programs.
Will the violence then force Thein Sein’s government to confront the Rohingya issue head on?
“But I wouldn’t expect them to do anything to resolve this issue inavery sustainable way. I expect them to do whatever they need to do to get this off the front pages and get it out of people’s attention and tamp it down for the time being so that people aren’t bothering them about it.”
Tags: Articles - ဆောင်းပါး Permalink	Post navigation
← Rohingya Muslims Persecuted In Myanmar And Bangladesh	ရခိုင်သားတို့၏အကြမ်းဖျက်မှုကြောင်းဆုံးရှုံးမှုအချို့-(FB) →
Popular Postsသံလျှင် GTC ကစုံတွဲ၏လုပ်ရပ်ကိုသဘောပေါက် လို့ လက် ထပ် ပြီး စီး ကြောင်း ဓည၀တီဆိုဒ်သို့မှန်ကန်သော သတင်း၊ ဆောင်း ပါး၊ ဓါတ် ပုံ များ ပေး ပို့ လို ပါ က danyawadi9@gmail.com နဲ့ ဆက် သွယ် ပါ ။ . . . If you want to post any real documents such as , History,Articles , photos and News ,Contact here.
GTC ကျောင်းသား/သူနှစ်ဦး၏ဗီဒီယိုဖိုင်ကြောင့် ကျောင်း အုပ် နုတ် ထွက် ရ
ယောက်ျား မိန်းမ ထိုကိစ္စ .....ဖြစ်အောင်ဖတ်ကြပါ
ရုပ်ရှင် များကြည့်ရန် အောက်တွင်ရွေးချယ်ပါ
THIT HTOO LWIN Movies, Videos, VCD, Latest
ရန်ကုန်မူးယစ်အရှေ့အထူးအဖွဲ့ စစ်ဆေးချက် စိုးမြတ်သူဇာ (ခ) မစိုး၏ အစစ်ခံချက် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတည်ငြိမ်အေးချမ်ရေး၊ဖွံ့ဖြိုး တိုး တက်ရေး၊ ပြန် လည် သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်း ချမ်း စွာ ပူး တွဲ အတူနေ ထိုင်ရေး - U Shwe Maung (MP)
Recent Posts	မြန်မာပြည်သူပြည်သားတိုင်းအထူးကျေးဇူးတင်သင့် သော ဦး ၀ိ ရ သူ(သို.) ခေတ် သစ် သစ္စက ဧ၊် ဘုန်း တော် ဘွဲ့
ဒိန်သာသနာအတွက် အသက်ပေးလျှူ သွားရှဟီဒီ တစ် ဦး ဓါတ်ပုံ
ရတနာပုံ မန္တလေးခေတ်က နန်း တွင်း ကျောက် တိုင် ကွင်း ရှိ ရွှေ ပန္နက် ဗ လီ ပုံ
၅-၁၂-၂၀၁၃ နေ့ နောက်ဆုံးရသတင်းလင့် . . . . . . . . ALL Myanmar Muslims News Update
ဘူးသီးတောင်-မောင်တောလမ်း(၃)စစ်ဆေးရေး ဂိတ် မှ လဝက ဝန် ထမ်း များ က ခ ရီး သွားနေသော ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုး များ အား ပုံစံ (၄) ကို အကြာင်းပြ ၍ မမှန် မကန်ငွေ ညှစ်
ဝမ်းချုပ်နေစဉ် ဆောင်သင့် ရှောင်သင့်သော အ စား အ စာ များ
ရခိုင်ပြည်နယ်တည်ငြိမ်အေးချမ်ရေး၊ ဖွံ့ ဖြိုး တိုး တက်ရေး၊ ပြန် လည် သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်း ချမ်း စွာ ပူး တွဲ အ တူနေ ထိုင်ရေး
ရခိုင်မရှိ ဗမာသာရှိ၊ ရိုဟင်ဂျာမရှိ ဘင်္ဂလီသာရှိ
အန်ဂိုလာ၊ မြန်မာနှင့် ဖိလစ်ပိုင် မွတ်စလင်များအရေး OIC အကြီးအကဲ စိုးရိမ်ပူပန်
ရခိုင်- ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုး အ မည် ဖြင့် ထုတ် ပေး နိုင် ငံ သား စီ စစ် ရေး ကဒ်
Preliminary informal meeting for Rakhine State conflict resolution finding
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် ရေဒီယိုမှတဆင့် ပြည် သူ များ သို့ ပြော ကြား သည့် မိန့် ခွန်း
တရားဝင် ပြင်ဆင်နေသောဘာသာရေးအဆောက် အ ဦး ကို လူ အင် အား သုံး ၍ တား ဆီးနှောက် ယှက်
နှစ်ပေါင်း ၁၂၆ နှစ် သက်တမ်းရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာ အ ထောက် အ ထား
(၁-၁၁–၂၀၁၃) နေ့နောက်ဆုံးရသတင်းများ . . . . . . . . ALL Myanmar Muslims News Update
ရန်ကုန်မူးယစ်အရှေ့အထူးအဖွဲ့ စစ်ဆေးချက် စိုးမြတ်သူဇာ (ခ) မစိုး၏ အစစ်ခံချက်
ဦးဦးမှော်ဆရာ ပြော သော ဇာတ်လမ်းတွေ – အပိုင်း(၄)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် မဲလ်ဘုန်းမြန်မာ တိုင်း ရင်း သား များ မိ သား စု တွေ့ ဆုံ ပွဲ မိန့် ခွန်း
*** ဒေါ်စု သြဇီမှာ ပြောပြတဲ့ ဒီပဲယင်း အကြောင်း ***
ငွေမပေးပါက အမှုဆင်၍ ထောင်ချမည်ဟု ရဲများက ခြိမ်းခြောက်၍ ငွေညှစ်
အာရကန်မူစလင်၊ ရို ဟင် ဂျာ များ သည် နိုင်ငံ သား၊ တိုင်း ရင်း သား ဖြစ် သလော – အ ခန်း ဆက် (၁ ၊၂)
အာရကန်မူစလင်၊ ရိုဟင်ဂျာများသည် နိုင်ငံ သား၊ တိုင်း ရင်း သား ဖြစ် သလော – အခန်းဆက် (၂)
အိုဘားမားအားလူသတ်သမားအဖြစ် ခ ရစ် ယာန် ဘုန်း တော်ကြီး တစ်ဦး စွပ် စွဲ
” အရှင် ၀ီရသူ ထံသို့ ချေပချက် ”
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမည့် ကိစ္စနှင့် ပတ် သက် ပြီး ဒေါက် တာ ဦး မြင့် သိန်း မှ ပညာ ပေး ဟော ပြော
ငွေမည်းနှင့် တရားမဝင်ပစ္စည်းများ ထိန်းချုပ်ရေးဥပဒေ ပြင်ရန်ရေးဆွဲနေ
ရခိုင်ဒေသရဲ့ ဆပ်ကော် မရှင် နာ ချားလ်စ်ပါတန် က ၁၈၂၆ ဧပြီ (၂၆)ရက်နေ့စွဲနဲ့ ဗြိတိသျှအစိုးရဆီ တင်ခဲ့တဲ့ အစီရင်ခံစာ၊ ဦးဦးမှော်ဆရာ
အာရကန်မူစလင်၊ ရိုဟင်ဂျာများသည် နိုင်ငံ သား၊ တိုင်း ရင်း သား ဖြစ် သလော – အခန်းဆက် (၁)
အမေရိကန် နိုင်ငံမှာ နိုဝင်ဘာလရဲ့ စတုတ္ထမြောက် ကြာသပတေး နေ့ကို Thanksgiving Day လို့သတ်မှတ်
Articles – ဆောင်းပါး (3608)
မြန်မာ – English (8)
Docu: – အထောက်ထား (74)
English Version (375)
Arakan History (18)
Burmese History (5)
M-M History (6)
General – အထွေထွေ (34)
Health – ကျန်းမာရေး (266)
History – သမိုင်း (269)
Interviews – အင်တာဗျူး (160)
Islamic အစ္စလာမ်ရေးရာ (17)
Item – ခေါင်းစဉ်ခွဲ (2)
Laws – ဥပဒေ (130)
News – သတင်း (7877)
Notes – မှတ်စု (1162)
Notice – သတိပေးချက် (263)
Open letter အိတ်ဖွင့်စာ (4)
Other – အခြား (1)
Politics – ပေါ်လစီ (837)
Rohingya – English (8)
Specail – အထူး (1812)
Technique – နည်းပညာ (20)
Archives ယခင် ပိုစ်များဖတ်ရန်	Select Month December 2013 (29)
January 2013 (862)
November 2012 (667)
October 2012 (724)
AD(၁၈၂၃)ခုနှစ် မ တိုင် မီ က မြန် မာ နိုင် ငံ ၌ ပင် ရင်း ၌ နှိုင် ငံ အ ဖြစ် နေ ထိုင် ကြ ခဲ့ သော မွတ် ဆ လင် များ
Rohingya History ( ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု သမိုင်း ) By Dr. Zamiruddin
The Best Doccuments of Rohingyas in Burma, အကောင်းဆုံး ရိုဟင်ဂျာ အထောက် အထား များ : Compiled by N.D.P.D. (Revised and New addition)
ဒေါက်တာအေးချမ်းနှင့်အပေါင်းပါတို့ အတွက် ရှင်းလင်း ချက် -
Total guests visited လာဖတ်သည့် ဧည့်သည်ပေါင်း 2,069,398 ဦး
Visitors’ Countries Since 16-11-2012;လာဖတ်သူတို့ နိုင်ငံ	Click here to read the articles by date-posted ရက်စွဲ အလိုက် ဖတ်ရှုရန် June 2012
World News	Flickr Photos	More Photos
All News Update သတင်းဆိုဒ်
Kay Tezato ခေဋီဈက်အို
Follow “Danya Wadi”